PVC & WPC မြို့ရိုးအပြား
WPC မြို့ရိုးကို panel က
PVC Panel ကို
အဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုဒါပေါ်မှာအလှဆင်ပစ္စည်းများ, ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများ, အထပ်သားအမျိုးမျိုးတို့ကို, မယ်လမင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်အထပ်သားများနှင့်အမျိုးမျိုးဖုံးလွှမ်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဝိညာဉျသအတွက်ထူးချွန်၏လိုက်စားအမွေ, လောကီသားကြောင့် Dalu Wood က၏ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြပါစို့။
ကျော်ကို 15 နှစ်အဘို့, ရှန်ဒေါင်းရွှေကုန်းတွင်းပိုင်း Decoration ပစ္စည်းများ Co. , Ltd မှသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်များစွာကိုနိုင်ငံခြားဖောက်သည်တွေနဲ့တည်ငြိမ်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးမျိုးကိုထူထောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး access ကိုအတူရှန်ဒေါင်းတည်ရှိသည်။
စသည်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသာလွန်အရည်အသွေးနှင့်အတူအလှဆင်မြို့ရိုးအပြားများကိုဆက်ကပ်အပ်နှံသည်, PVC စကျင်ကျောက်စာရွက်, PVC မြို့ရိုးကို panel က, WPC panel ကိုနှင့် PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့: အဓိကထုတ်ကုန်အပါအဝင်အမျိုးမျိုးသော PVC ပြားမျိုးနှင့် WPC ပြားကိုဖုံးလွှမ်း။ စားသုံးသူစိတ်ကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုများအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးလှုံ့ဆျောမှုပါ!
ကျနော်တို့ကအမြဲ "ဤလောကတရုတ်ထုတ်ကုန်ကိုချစ်ပါစေ" နှင့်မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်ကာလ၌ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းအသစ်သော client များနှင့်အတူအောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းဖို့မျှော်လင့်၏စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်မှလိုက်နာနေကြသည်။
ကမ္ဘာကြီးကို Make တရုတ်ထုတ်ကုန်ကိုချစ်
မိုးလုံလေလုံ PVC WPC Great Wall Panel ကို
1.Specifications ရှိနိုင် Colo ...
ခ wpc အလှဆင် profile များကိုမြင့် Great Wall panel က ...
ဖောင်းကြွအမှတ်တရ Panel ကို
ပစ္စည်းပလပ်စတစ်နှင့်သစ်သား Technological ...
Eco-Wood က WPC မျက်နှာကျက်
ပစ္စည်းသစ်သား, PVC, အပိုဆောင်း Technol ...
PVC ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မြို့ရိုးကိုဃများအတွက် PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ / စာရွက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ ...
1.Specifications: PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာ ...
အစိုင်အခဲ PVC Forex စာရွက် 1.22 * 2.44m အဖြူ celuka p ...
1. အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: PVC အမြှုပ်ဘုတ်အဖွဲ့ ...
1. ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ: နမ် ...
ကျော်ကို 15 နှစ်အဘို့, ရှန်ဒေါင်းရွှေကုန်းတွင်းပိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd မှသုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကုန်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်များစွာကိုနိုင်ငံခြားဖောက်သည်တွေနဲ့တည်ငြိမ်ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးဟာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ကြ ...
ရှန်ဒေါင်းရွှေကုန်းတွင်းပိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd မှ။ 2019 @ All rights reserved
Linyi မြို့, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်
PVC အမှတ်တရ Panel ကို, Composite Plywood, ရုပ်ရှင်မကျြနှာကို shutter အထပ်သား, PVC အလှဆင်စာရွက်, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်အထပ်သား, Plywood Exporter,